Ciraaq: Saraakiil Sar-sare oo Ururka ISIS laga Dilay - iftineducation.com
Ciraaq: Saraakiil Sar-sare oo Ururka ISIS laga Dilay
aadan21 / December 19, 2014
iftineducation.com – 3 sarkaal oo sarsare oo ka tirsanaa ururka ISIS ayaa lagu dilay weeraro xagga cirka oo lagu beegsaday, weeraradaas oo ka dhacay dalka Ciraaq. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa warkan laga soo xigtay Khamiistii shalay.
Sarkaalka ayaa sheegay in dilalkani ay dhaceen intii u dhaxaysay bishii November iyo bilowga bishan December. Sarkaalka ayaa intaas ku daray inay arrintani wiiqi doonto awooddii ururka ee goobaha uu ka haysto dalka Ciraaq iyo Suuriya.
Saraakiisha duqeynta lagu dilay ayaa lagu kala sheegay Xaji Mutazz oo dhinaca maamulka u qaabilsanaa hogaamiyaha ururka ISIS, Abubakar Al-Baqdadi. Sarkaalka kale ayaa lagu sheegay Abdel Baset oo ahaa sarkaalkii ugu sareeyey militariga ururka. Sarkaalka saddexaad ayaa magaciisa lagu sheegay Radwin Talib oo ahaa sarkaal heer dhexe, amiirna ka ahaa magaalada Mosul.
Warkan ayaa soo baxay, iyada oo saraakiisha militariga ee Maraykanku ay sheegeen in tiro ka badan 1300 oo weerar oo dhinaca cirka ah iyo ciidan ammaan oo xoog badan oo dalka Ciraaq ka socdaa ay raad weyn ku yeesheen dhimista awoodda ururka ISIS, dalka Ciraaq gudihiisa.
Gabadha Siilaanyo Oo lacag waalan lagu guurinayo
Daawo : Xildhibaano ku dhagan Ra’iisul Wasaare Sharmaake